VaTembo Vanoti Vane Chivimbo chekuKunda muSarudzo dzaMeya weAllentown muPennsylvania
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidza musarudzo dzameya weguta reAllentown mudunhu re Pennyslvania muAmerica, VaSolomon Tembo, vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo dziri kuitwa musi wa 7 Mbudzi gore rino.
VaTembo, avo vagara muAmerica kwemakore anodarika makumi maviri, vari kukwikwidzana naVaEd Pawloski vanove meya pari zvino vari vebato reDemocratic Party, VaJohn Richard Ingram vakazvimirira, naVaNat Hyman vebato reRepublican Party.
Mumwe ari kukwikwidza asi zita rake risiri pamagwaro esarudzo ndaVaRay O'Connell vanove vebato reDemocratic Party. VaO'Connell vari kukwikwidza vari anonzi write-in candidate, zvichireva kuti vanenge vachida kuvavhotera vanoita zvekunyora zita ravo pagwaro resarudzo.
VaTembo, avo vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa, vanoti zvimhingamipinyi zvavari kusangana nazvo pari zvino ndezvekushaya mari inovakwanira mukutsvaga rutsigiro, asi vachiti kunyange zvakadaro hurongwa hwavo huri kufamba sezvavanotarisira.
"Chikuru chandaida chaizvo chaizvo, chandaida kuti ndiite, ndechekuisawo ma bill boards kana maviri kana matatu muAllentown ayo anenge achionekwawo nevanhu vanenge vachipinda Allentown vanenge vachidhiraivha. Munongozivavowo bill board rinenge richiratidza, rakakura."
Vanoenderera mberi vachiti, "Ndochinhu chatakangotadza chete kuisa because mari dzacho dzinodiwa dzakati wandeyi. Hatina kukwanisa ku raiser mari yakati oo. Saka ndochingave chakandikanganisa chete, but zvimwe zvese zviri on place," VaTembo vanodaro.
Vanoti vane chikwata chakasimba chevanhu vakazvipira kushanda vachivabatsira chiri kutungamirwa naVaFrancis Mawindi, icho chiri kuita basa rose rekumhanyamhanya chichi vatsvagira rutsigiro.
Pari zvino VaTembo nechikwata ichi vari mushishi kufamba mudzimba vachisangana nevanhu vachivatsanangurira zvakanakira kuti vavavhotere sameya weAllentown.
Panguva iyo vakawanda vari kunze kwenyika vari kuita chipatapata kumhanyira kumusha kunokwikwidza musarudzo dzeko, VaTembo vari kusimudza mureza weZimbabwe vari mhiri kwemakungwa.